Wes Craven 'Enyi na-egbu egbu' Scream Factor Blu-Ray nwere usoro pụrụ iche pụrụ iche-iHorror
Mbido Blu ụzarị Wes Craven 'Enyi na-egbu egbu' Scream Factor Blu-Ray nwere usoro pụrụ iche pụrụ iche
Wes Craven 'Enyi na-egbu egbu' Scream Factor Blu-Ray nwere usoro pụrụ iche pụrụ iche
Ndepụta dị mma nke atụmatụ pụrụ iche
by Trey Hilburn III September 12, 2021 529 echiche
Nke Wes Craven Enyi na-egbu egbu na -aga iti mkpu! Ụlọ ọrụ Blu-Ray n'ọnwa Ọktọba a. Akụkọ ịhụnanya Wes Craven dị ka weird Science zutere Nnukwu alllọ Ahịa agwakọta na akụkọ ihunanya iberibe. Ọ na -egosipụtakwa otu ogbugbu isi kacha egbu egbu nke etinyegoro na sinima. Ọ gụnyere basketball na Anne Ramsey na Kristy Swanson.
Ha na -akọwapụta nke m Enyi na-egbu egbu na-aga dị ka nke a:
Onye maara ihe dị afọ iri na ụma Paul (Matthew Labyorteaux, Barbarians na The Gate), ọkachamara na nyocha ụbụrụ, nwere ezigbo ndị enyi abụọ: robot ya dị ịtụnanya… na nwa agbọghọ mara mma nke na -esote (Kristy Swanson, Buffy The Vampire Slayer). Mgbe ọdachi dakwasịrị ndị enyi ya abụọ, ọ na -achọsi ike ịzọpụta ha site na ịkwanye teknụzụ gafere ókè ya na -anwụ anwụ na mpaghara egwu dị egwu.
Mmepụta na Enyi na-egbu egbu bụ ntakịrị ọgbaghara. Na mbụ, enwere atụmatụ ime ka ihe nkiri ahụ lekwasị anya na ndị na -agụ akụkọ na akụkọ ịhụnanya. Agbanyeghị, ozugbo ewepụtara ihe nkiri ahụ, Warner Bros. tinyere aka ma rịọ ka enwekwuo ihe ike na ime ihe ike. Ọ bụ ya mere ime ihe ike nke dị na fim ahụ, gụnyere mgbawa isi Ramsey ji adị ntakịrị. Ọ bụ ntakịrị mwepụta ga -ala n'iyi, mana ọ jisiri ike chọta ndị na -ege ya ntị, n'agbanyeghị na ọ bụghị nnukwu ndị na -achọta ya.
Usoro ahịrị maka atụmatụ pụrụ iche na-aga dị ka nke a:
Ọhụrụ 2K nyocha nke interpositive
NEW Hey Sam, Nice Shot - N'ajụjụ ọnụ onye na -eme ihe nkiri Kristy Swanson
Edemede Ọhụrụ na Ọbara - ajụjụ ọnụ onye ode akwụkwọ nyocha Bruce Joel Rubin
ỌRỌỌTỌ ỌZỌ, Ramsey na ịbọ ọbọ - ajụjụ ọnụ nke onye na -ese ihe mmetụta pụrụ iche Lance Anderson
Symphony Ọhụrụ nke Samantha - ajụjụ ọnụ ya na onye na -ede abụ Charles Bernstein
Ihe nkiri nkiri (na Bekee, Spanish na German)
Ị nwere ike gaba ka iti mkpu! Ibe ihe nrụpụta iji nweta ihe izizi gị na.